ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံး မြို့ ကြီးများ | အိမ့်မှူးသော်
ဒီတစ်ခါ ကျွန်တော်ဖတ်မိသော အရာလေးတစ်ခုကိုပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် ။ ဗဟုသုတ အဖြစ်ပေါ့။ မသိသေးသော သူများအတွက်ပါ။
(၁). Jericho, Palestinian Territories (ယေရိခေါမြို့ ၊ ပါလက်စတိုင်းပိုင်နယ်) = မြို့တည်နှစ် - 9,000 BC
(၂). Byblos, Lebanon (ဘာဘီလုံမြို့ ၊ လက်ဘနွမ်နိုင်ငံ) = မြို့ တည်နှစ် - 5,000 BC
(၃). Aleppo, Syria (အလက်ပ်ပိုမြို့ ၊ ဆီးရီးယားနိုင်ငံ) = မြို့ တည်နှစ် - 4,300 BC
(၄). Damascus, Syria (ဒမတ်စကတ်စ်၊ ဆီးရီးယားနိုင်ငံ) = မြို့ တည်နှစ် - 4,300 BC
(၅). Susa, Iran (စူစာ၊ အီရန်နိုင်ငံ) =မြို့ တည်နှစ် - 4,200 BC